IOT - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Waa maxay IoT?
Internetka waxyaalaha (IoT) Waxaan u malaynay kaliya xayawaankayaga oo nala hadlaya laakiin weligaa ma malaysay in gurigaagu kula hadlayo adiga ama baabuurkaaga, albaabka la hadlaya furayaasha iftiinka! Internetku wuxuu suurtogeliyey suurtogalnimada isku xidhka ku dhawaad ​​wax walba oo nagu xeeran. Qaboojiyaha, mashiinka dharka lagu dhaqo, microwave -ka iyo xitaa dheriyada, hadda waxba ma taabto dunida dhijitaalka ah.
Muhiimadda IoT qaybaha kala duwan?
Waxaan u malaynay kaliya xayawaankayaga oo nala hadlaya laakiin weligaa ma malaysay in gurigaagu kula hadlayo adiga ama baabuurkaaga, albaabka la hadlaya furayaasha iftiinka! Internetku wuxuu suurtogeliyey suurtogalnimada isku xidhka ku dhawaad ​​wax walba oo nagu xeeran. Qaboojiyaha, mashiinka dharka lagu dhaqo, microwave -ka iyo xitaa dheriyadaada, hadda waxba ma taabto dunida dhijitaalka ah. Waxyaabaha maalin walba leh cinwaanadooda IP -ga ayaa dhowaan noqon doona xaqiiqda. Isgaadhsiintaan ee waxyaalaha ayaa noqotay aragtida ugu dambaysa ee tiknoolajiyadda sheeganaysa inay hagaajinayso nolosheena. Hase yeeshee, waxaan ku jirnaa marxaladihii hore ee IoT. IoT waxay furi doontaa durdurro cusub oo dakhli ah, moodallo ganacsi, iyo aragtiyo xagga tiknolojiyadda ah. Marka la eego baaxad weyn waxay faa'iido u yeelan doontaa labada isticmaale ee gaarka ah iyaga oo siinaya nolol sare, raaxo, amni iyo shirkadu waxay ka caawin doontaa yareynta qiimaha, kasbashada hufnaanta iyo xakameynta ganacsigooda. IoT waxay suuqyada u keeni doontaa mowjado qaybo cusub ah. Noocyada cusub ee isku-xirnaanta bilaa-waayirka iyo borotokoollada, moodallo ganacsi oo cusub oo leh kharashkii lahaanshaha oo yaraaday, iyo UI/UX aan dhib lahayn si aan u xuso dhowr. Teknolojiyad kala duwan sida Wi-Max, Bluetooth, Wifi, Wi-Fi Awood Yar, LTE, Ethernet joogto ah iyo Li-Fi ugu dambeeyay, ayaa durba loo adeegsaday in lagu xiro qaybaha kala duwan ee IoT dareemayaasha laakiin sanadkaan wuxuu arki lahaa Sigfox, LoRaWAN iyo 3GPP ee cidhiidhiga (NB) la tijaabinayo. Shirkadaha, dhanka kale, waxay faa'iidooyin waaweyn ku heli doonaan IoT. Shaqada fog, raadinta alaabada, iyo maaraynta, hufnaanta iyo waxsoosaarka, xawaaraha iyo helitaanka, waa dhul yar oo tikniyoolajiyadu ka shaqeyn doonto yaabab ..
Qalabka guryaha casriga ah ayaa u oggolaanaya milkiilayaasha inay xakameeyaan oo ay kormeeraan jaangooyooyin ballaaran sida kor u qaadista kormeerka guriga, xakamaynta marin u helka, amniga, iyo waxtarka tamarta. Noocyo badan oo guryaha casriga ah ayaa iska kaashanaya noocyo kala duwan oo qalab ah si looga dhigo kuwo caqli badan, ka waxtar badan oo ammaan ah. Qalabyo badan sida Eskesso, Samsung fridge firinjeer iyo Genican waxay ku darayaan ku habboonaanta qof walba noloshiisa sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Amazon Echo waa aalad kale oo casri ah oo u shaqeysa sida processor-ka dhammaan qalabka gurigaaga. Qalab kale oo caan ah Barashada Heerkulka, oo ay soo saarto Nest, ayaa si otomaatig ah u hagaajiya heerkulka guriga iyada oo loo marayo dareemayaal gundhig ah. Qalabkani waa wax xoogaa qaali ah hadda, sababtoo ah kharashyada horumarinta iyo iibka oo yaraa. Hase yeeshe horumarin dheeraad ah, sicirka ayaa la filayaa inuu hoos u dhaco taasoo ka dhigeysa iyaga kuwa la awoodi kara celcelis ahaan macaamil. Dhawaan waxaan sidoo kale arki karnaa kaaliyeyaal shaqsiyadeed iyo aalado wareegaya guryahayaga dhexdooda waana tan kaliya qayb yar oo IoT ay u badalayso. Xitaa warshadaha daryeelka caafimaadka, IoT waxay sameyneysaa calaamado. Fikradda 'sariiraha caqliga badan' waxaa laga hirgaliyaa isbitaalo yar oo kala saari kara dhaqdhaqaaqa bukaanka isla markaana jaangoyn kara dhererka si markaa aan loo baahnayn kalkaaliyayaal caafimaad ama wax faragelin bina-aadam ah. Waxa kale oo jira shirkado dawooyinka guryaha lagu iibsado oo soo socda kuwaas oo la socon doona haddii daawada lagu qaato waqtigeeda iyo in kale iyadoo la adeegsanayo xogta ku kaydsan daruuraha. Raad raacayaasha macluumaadka caafimaadka ee ka caawinaya isdhexgalka bukaanka iyo dhakhtarka ayaa sidoo kale furaya habab aalado caqli badan si ay u keenaan natiijooyin wanaagsan dhinaca caafimaadka. Iyadoo tikniyoolajiyaddu ay bilaabeyso in laga hirgeliyo meel kasta, waxay soo saari doontaa natiijooyin aad u wanaagsan iyadoo la yareynayo kharashyada, natiijooyinka daaweynta ee la wanaajiyay, waayo-aragnimada bukaanka oo la wanaajiyay, khaladaadka la dhimay, maareynta daawooyinka oo kor loo qaaday iyo hagaajinta maaraynta cudurka.
Marka laga soo tago IoT-da loo adeegsaday guryaha casriga ah, nidaamyada amniga ee caqliga ama qalabka tamarta ee bixiya raaxada iyo ladnaanta shaqsiyadeed, waxay u gudubtay dhanka magaalooyinka oo ka dhigaysa mid caqli badan. Iyada oo ujeedadu tahay isku xirka sirdoonka iyo macluumaadka aaladaha, shirkado kala duwan ayaa ka shaqeynaya sameynta shabakad aalado isku xiran. Isku-darka falanqaynta, xogta weyn, iyo isku xirnaanta meel walba waxay keenaysaa awoodo cusub oo aad u ballaadhan sida xakamaynta iyo maaraynta aaladaha, awoodda si fog loola socdo iyo in aragti laga helo xog tiro badan. Sidaa awgeed IoT waxay si firfircoon u beddeleysaa kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyinka gebi ahaanba iyadoo la yareynayo ciriiriga taraafikada, kor u qaadista gaadiidka dadweynaha, iyadoo la abuurayo adeegyo degmo oo hufan oo qiimo badan leh isla markaana dadka laga dhigaayo kuwo ku hawlan amni. IoT waxay isku xireysaa dhowr qalab oo casri ah maalin kasta sanadaha soo socdana, waxaa nagu hareeraysnaan doona ilaa 24 bilyan oo qalab IoT ah. Hadda taasi waa war weyn! Marka laga reebo guryaha casriga ah, nidaamyada keydinta tamarta caqliga badan, aaladaha casriga ah ayaa sidoo kale dadka ka caawiya inay la socdaan caafimaadkooda iyaga oo ka warcelinaya dawooyinka la hagaajiyay oo buuxa. Gawaarida kuxiran waxay kuxirantahay infraraha magaalooyinka caqliga leh si ay ubadasho qaababkii caadiga ahaa ee darawallada ay horay usii raaceen. Laakiin faa'iidooyinkan ayaa sidoo kale khataraha iman kara.
Baarayaasha MIT iyo Michigan waxay heleen dulduleelo aad u fara badan oo ka mid ah aaladaha casriga ah ee casriga ah kuwaas oo siin kara haakarisku meelo badan oo laga soo galo si ay amniga u jabiyaan. Sidaa darteed shirkado badan ayaa amniga gelinaya wax soo saarkooda sida ugu muhiimsan. Ka dib weerarkii uu sababay Mirai botnet dabayaaqadii sanadkii hore, waxay u ahayd baraarujin qof walba waxaana loo baahan yahay dadaal dheeri ah mustaqbalka si looga ilaaliyo burcadda internetka. In yar oo ka mid ah walaaca amniga ee aan halkan ku ogaan karno ayaa ah:
Macluumaad dheeri ah - xog aad u tiro badan ayaa ilbiriqsi kasta lagu daraa aaladaha IoT tanina waxay hubaal u abuuri doontaa goobo laga soo galo qataraha internetka
Dhexgalka xogta aan laqarin - aaladahaan iskuxiran waa la jabin karaa si ay udhawaan u weeraraan guriga ama xafiiska qofka. Xitaa mitirka guriga caqliga leh ayaa loo isticmaali karaa in lagu dabagalo dhaqdhaqaaqyadaaga maalinlaha ah sida ay cadeeyeen saynisyahannada Jarmalka
Kalsoonida shacabka - Sannadkii 2015, Maamulka Xakameynta ee Smart Home wuxuu ogaaday in dadku aad uga walaacsan yihiin xogtooda laga xado guryaha caqliga badan. Tani waxay noqon kartaa hal sabab oo muhiim u ah in macaamiishu aysan si fudud ugu beddelin IoT. Internetka Waxyaabaha ayaa ah heerka ku xigga otomaatiga iyo soo ifbixinta tikniyoolajiyadda cusub ayaa hubaal horumarin doonta dhinacyo badan oo nolosheena ah hadday tahay xagga shaqada ama guriga. Sannadkan wuxuu arki lahaa IoT inuu u kobco warshad balaayiin doolar ah oo keliya haddii walaacyada amniga iyo asturnaanta la eego.